VAOVAO ORINASA |
Doka momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo
Politika momba ny fampiasana angona Ity politika ity dia mamaritra ny fampahalalana ilaintsika harahina hanohanana ny dokam-barotra. Inona avy ireo karazana fampahalalana angoninay? Mba hanomezana ny vokatray dia tsy maintsy manodina vaovao momba anao izahay. Ny karazana fampahalalana angoninay dia miankina amin'ny fomba fampiasanao ny vokatray. Azonao atao ny mianatra ny fomba ...
Inona no atao hoe fanidiana mangatsiaka?
tamin'ny admin tamin'ny 19-08-08
Ny teknolojia Cold stamping dia mifandraika amin'ny nentin-drazana iray amin'ny Hot Stamping izay samy afaka mahatratra ny vokatra vita pirinty mamirapiratra amin'ny fitomboka. Ny mahasamihafa azy ireo dia ny fitomboka amin'ny hatsiaka dia tsy mila fanafanana rehefa ampiasaina. Izay ny tantara ny stampi mangatsiaka ...
Vita soa aman-tsara ny fampirantiana Iraisampirenena Iraisampirenena eran-tany China
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-10-29
Tamin'ny 28 Oktobra 2018 dia vita soa aman-tsara tany Shanghai ny fampirantiana Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena China faha-7. Miaraka amin'ny lohahevitra "fanokafana ny vanim-potoanan'ny fanontana pirinty" amin'ity fampirantiana rehetra natao tamin'ny taona ity dia maneho tanteraka ny valim-panentanana sy ny firoboroboan'ny teknolojia fanontana ao ...
Kingfisher Labels dia mametraka presse Edo flexo fahafito
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-10-11
Kingfisher Labels miorina ao Yate avaratra Bristol any Angletera dia nividy Edale FL3 ny press flexo fahafito avy amin'ny mpamokatra fitaovana UK. Kingfisher Labels dia manolotra ny tarehy fanatsarana tarehy sy ny fahasalamana miaraka amin'ny marika fametahana tena. Nametraka ny presse Edale flexo voalohany izy tamin'ny taona 2001. Ny gazety vaovao ...
Mizara loharano fanontana amin'ny mpifaninana Fairfax manidy trano fanontam-pirinty roa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-09-28
Araka ny fifanarahana nifanaovan'ny mpifaninana News Corp hizara loharanom-pirinty tamin'ny volana jolay tamin'ity taona ity dia nanidy trano fanontam-pirinty roa tany Queensland sy NSW ary ny fanaovana varotra. Ny iray amin'ireo orinasa fanontana dia any Ormiston 25 km miala ny busine afovoan'ny Brisbane ...
Manendry mpitantana ny Prati USA
tamin'ny admin tamin'ny 18-09-18
Prati dia nanendry an'i Frank Hasselberg ho olona hitarika ny sampana vaovao any Amerika Avaratra. Niorina ny Prati USA satria mikasa ny hanamafy ny fanoloran-tenany amin'ny tsena any Amerika Avaratra ny orinasa. Niara-niasa tamin'i Kocher + Beck Heidelberg sy i Gallus any Amerika Avaratra i Hasselberg ...
Parkside dia manangona vola indray amin'ny isa amin'ny laser
Parkside orinasa famonosana manokana dia nanao famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny fitaovana maoderina maoderina hamoronana fotoana vaovao. Ny fampiasam-bolany farany tamin'ny laser dia manome alàlana ny isa amin'ny laser amin'ny lafiny roa amin'ny sarimihetsika tokana na laminate mba hamoronana endriny fonosana mora misokatra sy miverina ...
Avery Dennison dia nandefa ireo milina PET namboarina tany Eropa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-08-30
Avery Dennison dia nilaza fa izy no mpamatsy fitaovana fanamarihana faneriterena voalohany nampiditra liner vita amin'ny PET (rPET) voaodina amin'ny varotra any Eropa. Ny liner vaovao rPET dia mampiasa fako aorian'ny mpanjifa voafantina tsara ary hampidirina amin'ny volana oktobra 2018 amin'ny doka maro ...
Kodak hivarotra fizarana fonosana flexographic
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-08-16
Kodak dia ny hivarotra ny fizarana fonosana flexographic ahafahany mifantoka amin'ny lozisialy lozisialy workflow inkjet orinasa sy ny fahazoan-dàlana. Ny fizarana dia mamokatra sy mivarotra ny rafitra Flexcel NX an'ny takelaka fanontana fitaovana fitoviana flexographic azo ampiasaina sy servic mifandraika ...
Nahazo an'i Bemis mpifaninana hiditra ao amin'ny NASDAQ i Amcor
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-08-08
Ny indostrian'ny fonosana dia misedra fahasahiranana maro noho ny fiakaran'ny akora fototra. Amin'ny maha-iray amin'ireo orinasam-pamonosana manerantany an'i Amcor (ASX: AMC) dia nifampiraharaha tamin'ny mpifaninana amerikana Bemis nandritra ny herintaona mahery ary efa hanatanteraka fifanarahana hahazoana ny orinasa amin'ny $ 7 miliara izay ...
Inovar Packaging dia mahazo Topp Labels
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-07-25
Inovar Packaging Group dia nahazo Topp Labels izay nanatsara ny fahaizany manompo ny tsena any Florida sy atsimo atsinanan'i Etazonia. Ny foiben-toerany any Dallas Texas Inovar dia mpamadika manokana ireo marika farany mihena ny tanany sy ny vokatra fonosana azo ovaina. Izy io dia manompo ny mpanjifa manga-chip ao anaty diver ...
SANCTIONS NPA SANCTIONS MAERSKLINE SY LALAN'NY FANDRAISANA telo hafa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-07-19
Ao anatin'ny ezaka hamahana ny fihetsiketsehana ataon'ny mpamily kamiao ao amin'ny Lagos Port Complex (LPC) sy ny Port Can Can Island (TCIP) Lagos, ny manampahefana ao amin'ny seranan-tsambo nizeriana (NPA) dia nanambara ny fampiatoana ny serivisy ho an'ny orinasam-pitaterana efatra. tamin'ny ohatra voalohany. Ireo Comp Shipping Shipping ...
sarimihetsika polyester, sarimihetsika lamination hafanana, Stamp mafana, Hot Foil, Fametahana foil mafana, mpanamboatra sarimihetsika bopp metallized,